Ifulethi elithandekayo eliyi-studio indawo yokupaka yamahhala ema - I-Airbnb
Ifulethi elithandekayo eliyi-studio indawo yokupaka yamahhala ema
Buyela emuva futhi unethezeke kulesi sikhala esizolile, esinesitayela. Yonke indlu yesitudiyo ingeyakho ukuthi uyijabulele ngendlela othanda ngayo.
Ifulethi elithandekayo nelinokuthula, elinefenisha ephelele & elihle endaweni ehlonishwa kakhulu eVictoria Island, eLagos. Okungu-~8 min ukuya e-Ikoyi, ~imizuzu eyi-12 ukuya e-Lekki, ~imizuzu eyi-12 ukuya e-Landmark Beach.
Ilungele imindeni, izithandani, abantu ngabanye nabahambi bebhizinisi futhi inokuphepha okungu-24/7 esizeni, ukunikezwa kwamandla okungama-24/7 ngaphandle kokuphazamiseka. I-AC, ikhishi eligcwele, igumbi lokugezela eligcwele eline-heater njll.
Indawo inamafulethi angu-5 futhi lena yifulethi elingu-4.
Izivakashi zithathe yonke ifulethi, okuhlanganisa:
- Ifulethi eliyi-1 elinombhede omkhulu.
- Indlu yangasese enendawo yokugezela yesimanje enomshini wokushisisa amanzi.
- Ikhishi eligcwele elinesitofu, isiqandisi, uhhavini we-microwave, izitsha zokupheka njll.
- Indawo yokuhlala enesikrini esikhulu se-TV ne-DSTV.
- Ideski nesihlalo somsebenzi uma udinga ukufunda noma ukusebenza
- I-patio enhle enezitshalo ezibukhoma.
- i-wifi -
oqhubekayo Lokhu kubhukha kuhambisana nesevisi ye-concierge ukuze kube lula kuwe.
Ifulethi lisendaweni ebiyelwe futhi ebiyelwe yabantu 24/7 ngabasebenzi bezokuphepha kanye nezinyathelo zokulawula ukufinyelela konke emphakathini ophephile kakhulu.
Ixhaswa kahle yi-Public Power supply kanye nama-backup kagesi angu-24/7 ngaphesheya kokuthwetshulwa kwezindlebe.
Kunendawo enhle eluhlaza ezungeze indawo.
I-Wifi – 31 Mbps
I-HDTV engu-43" ene- ikhebula ye-premium
Kunohlu oluphelele lwezindawo ezithakazelisayo endaweni. Elegushi Royal Beach, Lekki Conservation Centre, The Tarkwa Bay, The Palms, Lounge Elegushi (Queen’s Park), Fahrenheit, Hard Rock Cafe, Vapors, Mr Chang, Rhapsody kanye nohlu luyaqhubeka.
Hlola ibhuku lokuqondisa engikwenzele lona futhi lanamathiselwa kulolu hlu ukuze uthole lezi zindawo nokunye.
Ngitholakala ngebhokisi lokungenayo le-Airbnb, umbhalo, ucingo, njll. Zizwe ukhululekile ukuxhumana noma nini.